About Us | Kunshan Gubang Protective Equipment Technology Co., Ltd.
Kubva payakagadzwa, Yirentang yakazvipira kune chikonzero chekutarisira rudo uye hutano maererano nemitemo yebhizimisi ye "kuchengeta kunaka uye mutsa mupfungwa, kukudziridza muviri, nekuita zvakanaka". Iyo KN95 mask inogadzirwa naYirentang yapasa bvunzo dzese dzeGB2626-2006, GB2626-2019 uye EU chiyero che EN149: 2001 + A1: 2009. Chitupa cheEC chiri kugadziriswa uye chakasimbiswa neSGS uye ISO-9001-2015. VaChu Jiuyi, muvambi weYirentang, vanoomerera kumusimboti we "hutano husina nhando uye masiki kuponesa hupenyu hwevanhu". Kune hutsanana uye kuchengetedzeka kwekugadzirwa kwemasiki, huzivi hwebhizinesi hwe "kusaita zvinhu zvisina basa, kusaita purofiti yakaderera zvinhu", inoda kuti vanhu vese ve "Yirentang" varemekedze zvigadzirwa, vasina kutamba kwevana muhupenyu, kuisa kukosha. kune zvigadzirwa, uye kunatsa imwe neimwe yekugadzira link kuti ive nechokwadi chekukwana kwezvigadzirwa.
Kuomerera kune yechinyakare Chinese mushonga manzwiro e "kusimudzira hunhu uye mutsa" iyo yakapararira kwezviuru zvemakore, Yirentang anga achiomerera kukuziva kwekuzvibata kwe "kuchengeta kunaka uye mutsa mupfungwa uye kukudziridza mutsa mumuviri" kubva payakagadzwa. , uye anga achiteerera nehana uye achivavarira kukwana kugadzira masks ehutsanana nehana muindasitiri uye zvinoenderana nemitemo yehutano hwenyika. Zvigadzirwa zvaro zvine mukurumbira nekuda kwemhando yepamusoro yemidziyo, yakanakisa ruzivo uye hunyanzvi hwekuita. Kunyangwe zvigadzirwa zvisiri zvemishonga, Yiren Tang achiri kuomerera kune pfungwa yekuti "usaite zvinhu zvishoma, usareme uye usimbe", uye inoda kuti vashandi vese varemekedze hupenyu uye hutano, teerera kune. kunaka kwezvigadzirwa, uye kutungamira kutarisa uye kutarisa pachako kuti ave nechokwadi chekugadzirwa Chigadzirwa chacho chakanaka uye chakakwana, kuitira kuti vakuru nevaduku vasanyengedzwa uye vave nehana yakachena.
Edza mwoyo uye kunaka
Zita reYirentang rinowanikwa mukuremekedza hupenyu uye hutano. Yi ine chirevo chaicho, kuitira kuti isu tive vatariri vehupenyu uye hutano, tisina mhirizhonga yemagariro evanhu, uye nguva dzose tichinamatira kukutenda kwehutano; runako ipfungwa ine mutsa, inova mwero wetsika unofanirwa kuve nawo varapi kana vagadziri vezvigadzirwa zvehutano. Zvinotora vanhu sechinhu chinonyanya kukosha, chinobvisa mutsa uye chinochengetedza chinangwa chepakutanga. Ichi hachisi chiratidzo chete, chine pfungwa yebasa rezvakaitika kare, asiwo murairo wemhuri kune muvambi, VaChu Jiuyi, nevazukuru vake. Zvichaenderera mberi nemweya wekutsvaga chokwadi kwete kushandisa zvisizvo. Kuti uve nechokwadi chemhando yezvigadzirwa, Yirentang masks anogadzirwa nemhando yemhando yepamusoro nhasi. Zvese zvinongedzo zvekugadzira zvinopedzwa mumusangano usina guruva. Matanho matatu ekuyedza, anoti kuyedza zviwanikwa, semi-akapedza chigadzirwa kuyedzwa uye akapedza chigadzirwa kuyedzwa, akagadzirwa kuti ave nechokwadi chekuti masiki anosangana nezvinodiwa mune chero chinongedzo.
Nguva yese iyi, zvichibva papfungwa dzetsika dzakanaka dzechinyakare, Yirentang anga achigadzira hunyanzvi uye achigara achiongorora zvemhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvemasiki zvine hutano, zvichitungamira maitiro efashoni ine hutano uye kuedza kugadzira mararamiro ane hutano uye akasununguka. Mune ichangoburwa yrt2.0 yakatevedzana, kushamwaridzana kweganda uye kupindira kwemhepo kwemukati wemukati wemaski kunosimbiswa. Ndichiri kuvandudza mashandiro ekudzivirira, inoita kuti mushandisi agadzikane, ayo anokodzera vanhu vane tsandanyama, uye inoita kuti zvigadzirwa zvehutsanana zviende kumugwagwa une hutano uye wakagadzikana, uchifunga nezvese zvinodiwa nemushandisi uye pfungwa chaiyo yekunakidzwa. Muchikamu chekutanga chekutsvagisa nekusimudzira, kuitira kuvandudza mashandiro uye ruzivo rwemasiki, vanhu vemazera akasiyana vakasarudzwa kuti vatore chikamu muyedzo yekutanga yekupfeka yezvigadzirwa zvemask, uye anopfuura makumi matatu dhata akaongororwa zvakadzama kuti anyatso kuvandudza zvigadzirwa zviyero.
Kuvimbika uye mutoro
Mukutanga kwa2020, nekuda kwekukanganisa kwedenda idzva rekorona, indasitiri yezvigadzirwa zvehutano yaive mumhirizhonga, uye zvigadzirwa zvemask ndizvo zvakatanga kutakura. Mukutarisana nekudzvinyirirwa, Yirentang aigara achiomerera kumutemo we "kusawedzera mutengo uye kusaderedza chiyero". Nepfungwa yebasa re "kusawedzera mutengo uye kusadzikisira mwero", Yirentang inobata mabhizinesi nemoyo wese uye inobata vashandisi zvakaenzana, kuitira kupa veruzhinji masiki akachengeteka uye akachengeteka ehutsanana kuti afambe pamusoro pematambudziko. Mukurumbira wagara uri hwaro hwekutsika kwaYirentang munharaunda uye maindasitiri anotungamira. Zvatinovimbisa zvinofanira kuitwa uye zvatinoda kuita zvinofanira kuitwa nemazvo. Nenzira iyi chete ndipo patinogona kuwana kurumbidzwa kukuru uye kufarirwa neruzhinji. Kutenda kwakanaka ndihwo hwaro hwebhizimisi. "Yirentang" inovimbisa kuti kana iwe ukatenga iyi mhando yezvigadzirwa, kana ukatadza kupasa cheki cheki uye bvunzo, iwe uchawana kudzoserwa kwakazara.
Yirentang inoshingairira kuita mabasa ekubatsira veruzhinji, inosimbisa chimiro chakanaka chemagariro, inozivikanwa zvakanyanya neveruzhinji, uye yave yakavimbika mhando yezvigadzirwa zvehutano muindasitiri. Mukati, tinofanira kushandisa mweya weYirentang kukurudzira vashandi kuti vagadzire tsika dzakanaka dzezvokurapa, ruzivo rwemhizha uye mweya webasa, kukurudzira kushingaira, kutanga uye kugadzira, uye kuwedzera pfungwa yehutano hwemagariro evanhu.
Yirentang iri pasi peKN95 mask brand yeKunshan Gubang inodzivirira zvigadzirwa Technology Co., Ltd. bhizinesi iri riri muKunshan Zhengyuan Chuanghui Technology Industrial Park, inofukidza nzvimbo yakazara ye9878 square metres, iyo inoda kusvika 2000 square metres inoshandiswa kugadzira. yeKN95 masks, ine zuva nezuva kubuda kwe500000 zvidimbu. Iye zvino kune vashandi vanopfuura 100. Iro jira rakanyungudutswa rinotora zita remumba rine mukurumbira (Jiangsu jinmeida New Material Co., Ltd.), uye zvigadzirwa zvakagadzirwa. Japan, South Korea, Thailand, Vietnam neMalaysia, ine huwandu hwekutengesa hunosvika mamirioni gumi.
Yirentang - ita kufema kune hutano!